अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा - Shikhar Post Shikhar Post
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।उनको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल आज मंगलबार मध्यरातमा सकिँदैछ ।
त्यसअघि उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार उनको पुन: नियुक्ति र सपथ भोलिमात्र हुनेछ ।
यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. खतिवडाको राजीनामा स्वीकृत गर्डै उनले सम्हाल्दै आएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हाने गरी तोकेकी छन् ।
प्रकाशित मिति : मंगलवार, २० फाल्गुन २०७६ १७:४४